5-ta kulan ee ugu fiican MOBA ee loogu talagalay Android | Androidsis
Nooc caan ka noqday caan sannadihii la soo dhaafay waa MOBA., Multiplayer Online Battle Arena. Wakiilka ugu weyn ee noocan ah ayaa ah League of warkii. Ciyaar ku raaxeysatay guul weyn kombiyuutarada. Sababtoo ah in ciyaaro kale oo isku nooc ah ay arkeen iibintooda oo kordhay. Laakiin Kaliya kuma raaxeysan karno ciyaaraha MOBA ee kombuyuutarka, sidoo kale waxaa jira ciyaaro loogu talagalay Android.
Sida ku dhacday ciyaaraha MOBA ee kombuyuutarka, tirada cayaaraha noocyadan loogu talagalay Android ayaa kordhay gaar ahaan. Marka waxaan haysannaa xulasho ballaaran oo aan kala dooran karno. Markaas ayaannu kaaga tagnay adiga ciyaaraha MOBA ee ugu wanaagsan Android. Sidoo kale, dhammaantood waa lacag la’aan.
Sidan oo kale, xulashadan waxaan ku awoodnaa ku raaxayso ciyaaraha ugu fiican ee noocan ah ee loo heli karo Android adiga oo aan qarash gareeyn euro. Wax ay isticmaalayaasha oo dhami rabaan. Waxaan kuu daynaynaa MOBAyada bilaashka ah ee ugu fiican Android.
1 Arena ee Valor
2 Star Wars: Ciidamada Arena
3 Grand dagaal royale
5 Dagaalka casriga ah oo ay kasoo horjeeddo
Arena ee Valor
Es suurto gal ah mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan ka mid ah dadka isticmaala. Waxaan haynaa buug-yare 40 geesiyaal laga soo doorto qaabkeeda ciyaartoy badan. Shan ayaan la ciyaari karnaa shan, seddex ayaan ka hor imaaneynaa seddex ama mid ayaan wajaheynaa mid. Qurxin qurux badan iyo dagaalo aad u xiiso badan uga dhig heer la mid ah sida MOBA-yada caadiga ah ee ugu wanaagsan. Ciyaar aad u xiiso badan.
La ciyaarta soo dejintu waa bilaash. Gudaha waxaan ka helnaa wax iibsasho, in kastoo aysan daruuri ahayn in horay loo socdo.
Developer: Heerka aan dhamaadka lahayn
Star Wars: Ciidamada Arena
Un madax u noqo mid ka mid ah sagaasyaasha ugu caansan taariikhda. MOBA-daan loogu talagalay Android waxay na siisaa qaar ka mid ah astaamaha halyeeyada ugu badan ee filimada. Kuu ogolaanayaa inaan dagaalano dagaalo hal-hal ah waqtiga dhabta ah. Waxaan sidoo kale hogaamin karnaa koox. Waxa intaa dheer in ay awoodaan in ay ururiyaan kaararka si loo hagaajiyo xirfadaha jilayaasha iyo sidaas ku guuleysto dagaalka.
Mar labaad, soo dejintu waa lacag la'aan. Inkasta oo ay gudaha ku leedahay wax iibsasho.
Grand dagaal royale
Ciyaar ka sareysa dhamaanteed bilicsanaanta oo aad ugu eg Minecraft. Tani waxay horeyba uga dhigeysaa inay ka soo baxdo cinwaannada kale ee liiska. Maaddaama ay siinayso taabasho asal ah. Xaaladdan waxaan u guureynaa a jawi magaalo oo burburay. Waa inaan guuleysanaa si aan unoqonno badbaadin ee ugu dambeysay. Tan awgeed waxaan ku soo aruurineynaa hub ama shay kasta oo kale oo faa'iido leh oo aan ka helno dariiqayaga.
La soo degsashada ciyaartan MOBA ee loogu talagalay Android waa bilaash gudahana wax kuma iibsato.
Suurtagal mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo Leegada caanka ah ee caanka ah in aan hadda ka heli karno Android. Ciyaar aad u dhammeystiran oo suurtagal ah mid ka mid ah kuwa ugu fiican nooca. Waxay leedahay qaar ka mid ah sawirada weyn. Sidoo kale waxaan leenahay hababka ciyaarta kala duwanlaga bilaabo Ciyaar Degdeg ah oo Lagu Kala Saaray. Guud ahaan waxaa jira ilaa 30 geesiyaal uu ka xusho In lala dagaallamo.
La ciyaarta soo dejintu waa bilaash, sida kuwa kale. Xaaladdan oo kale waxaan u aragnaa taas waxaa jira wax iibsi ciyaarta. In kasta oo aysan qasab ahayn ama loo baahnayn in horay loo socdo, haddana waxay si fudud nooga caawinayaan inaan xoogaa dhaqso u dhaqaajinno qaybaha qaarkood.
Dagaalka casriga ah oo ay kasoo horjeeddo
Suurtagal mid kale oo ka mid ah cinwaannada ugu caansan MOBA noocyadooda ku saabsan Android. Waa taxane daabacay dhowr qaybood waqti ka dib. Tani waa tan ugu dambeysay dhammaantood. Waa in la ogaadaa inay jirtay sifiican loogu habeeyay aaladaha mobilada, gaar ahaan ciyaarta. Sawiradu waa fiican yihiin. Waa toogasho qofkii ugu horreeyay noo ogolaanaya inaan wajahno kooxaha. Waxaan leenahay wadar ah 12 xaraf ayaa la heli karaa ciyaarta.
La Ciyaartan kala soo degsashada Gameloft waa bilaash, inkasta oo aan wax ka iibsanno gudaha.
Dagaal Casri ah oo ka soo horjeeda: ciyaarta FPS
Tani waa xulashadeena ugu wanaagsan ee bilaashka ah ciyaaraha MOBA ee hadda loo heli karo Android. Hadda waxaa jira cinwaano badan oo MOBA ah oo laga heli karo Google Play. Laakiin, dhammaantood maahan noocaan. Sidaa darteed, xulashadani waa matalaad wanaagsan oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee jira. Sideed u aragtaa ciyaartan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha MOBA ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android